Izici nokubaluleka kwamamephu wokungcola okukhanya | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Amamephu wokungcola okukhanya
Phakathi kwezinhlobo zokungcola okukhona esinazo ezingathintwa ngqo noma zihlaziywe. Imayelana nokungcola okulula. Lokhu kungcoliswa kokukhanya kungukuguqulwa kwamazinga okukhanya kwemvelo akhiqizwa yimithombo yokukhanya okwenziwe ngabantu. Ukuze uhlukanise futhi uhlaziye imithelela lokhu kungcoliseka okukhona kuzo zonke izidalwa eziphilayo kanye nemvelo, amabalazwe wokungcola okulula.
Kule ndatshana sizochaza ukuthi yimaphi amamephu wokungcola okukhanyayo nokuthi enzani.
1 Kuyini ukungcoliswa okulula
2 Imiphumela yokungcoliswa kokukhanya
2.1 Ukukhanya kusakazeka esibhakabhakeni
2.2 Ukungena okulula nokukhanya
2.3 Imiphumela kokuhlukahluka kwemvelo
2.4 Ukubhujiswa komhlaba wesibhakabhaka
3 Amamephu wokungcola kokukhanya nokubaluleka kwawo
Kuyini ukungcoliswa okulula
Ukungcoliswa kokukhanya kuqukethe lolo shintsho kunani lokukhanyisa indawo ethile elinalo futhi elingahambelani nokukhanya kwemvelo okukhiqizwayo. Lokho kusho ukuthi, abantu basebenzisa izibani zokuzenzela ukuze bahlale ebusuku emadolobheni. Ukwedlulela kokufuduka emadolobheni esikutholile ngekhulu leminyaka elidlule yikhona okwenza ukuthi kube nokukhanyisa okwedlulele okuthinta ezinye izidalwa nezwe.
Impela wake wezwa izazi zezinkanyezi zikhuluma ukubonwa kwesibhakabhaka ebusuku kunzima ngenxa yalokhu kungcoliswa kokukhanya. Izinhlobo zezilwane ezinemikhuba yasebusuku nazo ziyathinteka kulokhu kukhanya okufakelwayo. Izinhlobo ezinjengezimpukane, eziya zingandile kakhulu kuyo yonke iplanethi.
Ithimba lososayensi lishicilele ibalazwe lokungcola kokukhanya okuvela emhlabeni wonke okwembula umthelela okhanyiswayo wokufakelwa emhlabeni wonke. Cishe ama-83% omphakathi womhlaba kanye namazwe angaphezu kwama-99% amazwe athuthukile ahlala ngaphansi kwesibhakabhaka esingcoliswe ukukhanya okufakelwayo.
Kuyo yonke iYurophu sinokungcola kokukhanya okunamandla kangangokuba abantu abangaphezu kwama-60% abakwazi ukubona iMilky Way. Ezweni lethu, sinokungcola kokukhanya okukhulu okubangela ukuthi abantu abangaphansi kuka-4% bahlale ezindaweni ezinokukhanya okuphansi okungekhona okwenziwe ngabantu.
Imiphumela yokungcoliswa kokukhanya
Sizohlaziya ngezansi kwemithelela ehlukene edalwa wukungcola okuncane empilweni yabantu nakwezinye izidalwa eziphilayo.
Ukukhanya kusakazeka esibhakabhakeni
Kuyisimo lapho ukukhanya kuphambukiselwe kuzo zonke izinhlangothi ngenxa yokuhlangana kwazo namanye ama-molecule asemoyeni nezinhlayiya ezingcolisayo ekumisweni. Lo mphumela osheshayo yilokho esikubonayo ukuthi kwenzeka kanjani i-halo ejwayelekile ekhanyayo emboza amadolobha futhi ebonakalayo amakhulu amakhilomitha kude. Singawabona futhi amafu akhazimulayo njengokungathi ayebengezela.
Ukungena okulula nokukhanya
Ukufakwa kokukhanya kwenzeka lapho kukhishwa ukukhanya lapho kungangena khona ezinye izindawo ezingomakhelwane. Lokhu kwenzeka kaningi ezindaweni ezisemadolobheni lapho ukukhanya okufakelwayo kungena emizini yabantu. Lokhu kubangela ukulahleka kwekhwalithi yempilo ngoba, yize umthelela kubantu ungaziwa ngokuphelele, kuyaziwa ukuthi kubanga ukuphazamiseka kokulala.
Ukubenyezela kwenzeka lapho abantu besemigwaqweni yomphakathi futhi ukubonakala kwakho kuphazamisekile noma kungenzeki ngomphumela wokukhanya kukhishwa ukufakwa okuhlukile okufakelwayo. Lokhu kubonakala ikakhulu ngokukhanyisa ngokweqile imigwaqo ucabanga ukuthi kwandisa ukuphepha emgwaqeni. Kodwa-ke, abashayeli bavame ukuhamba ngokushesha ezigabeni ezikhanyayo njengoba bebona kangcono.
Imiphumela kokuhlukahluka kwemvelo
Zonke ezinye izidalwa eziphilayo zithintekile ngokukhanya okwenziwe ngokweqile. Izimbali nezilwane zasebusuku zinomsebenzi ohlukile wezinto eziphilayo kunalokho okwenzeka emini. Lokhu kukhanya ngokungakhethi emabhishi kuhlasela impilo yasolwandle. Isibonelo, lokhu ukukhanya okufakelwayo kuguqula imijikelezo yokunyuka nokuwa kweplankton yasolwandle. Iphinda futhi ithinte imijikelezo yokuzala kabusha yezimfudu zasolwandle, ngoba iqondiswa ukukhanya kwenyanga futhi ididekile ngokukhanya kwamalambu asemgwaqweni.
Izinyoni, ngokwazo, nazo ziyamangaza futhi ziphazanyiswe ukukhanya okwenziwe ngokweqile. Unjalo-ke umthelela wokuthi izinhlobo eziningi zilahlekelwe yindlela yazo ngokuphelele kanti ezinye zifuna ukudla noma sekwephuze kakhulu kunokujwayelekile futhi zigcine zingenalutho esiswini. Yonke le mithelela iphazamisa ibhalansi phakathi kwabantu abahlukahlukene futhi ijwayele ukwephuka. Izinambuzane nazo ziguqulwa yimikhuba yasebusuku nokuba khona kwama-light light adala ikhefu kumjikelezo wazo wemvelo wemini nobusuku.
Ukubhujiswa komhlaba wesibhakabhaka
Masingakhohlwa ukuthi isibhakabhaka sasemadolobheni sinombala ompunga nowolintshi obhubhisa ngokuphelele i-nightcape. Asikwazi ukubona izinkanyezi esibhakabhakeni, lezi kuyifa lazo zonke izizukulwane futhi zibalulekile emvelaphi yamasiko nempucuko. Lokhu kuholela ekusweleni kwamasiko Njengoba izinganekwane eziningi ezixhunyaniswe nezinkanyezi zesibhakabhaka zilahlekile, ungazi isikhundla sazo futhi maqondana nesikhathi sonyaka esikuso. Ukubheka isibhakabhaka kunzima kakhulu.
Amamephu wokungcola kokukhanya nokubaluleka kwawo
Kunamabalazwe wokukhanya okungcane akhombisa umthelela walokhu kukhanya emhlabeni wonke. Ukukhanya okukhonjiswe kumamephu kungumphumela we inhlanganisela yezithombe ezihlukene zesathelayithi nezilinganiso eziningi. Kungabonakala kahle ezindaweni ezinamadolobha kakhulu ngoba yilezo lapho kunokukhanya okuningi okwenziwe khona. Enye yezindawo emhlabeni eheha ukunakwa kakhulu ukusakazwa kokukhanya okuzungeze umfula iNayile Lezi zonke izindawo zokuhlala kanye namadolobhana athuthukise indlela yawo yokuphila azungeze uMfula iNayile.
Imibala ehlukahlukene isetshenziselwa ukuveza izinga lokungcola kokukhanya okukhona. Labo abaphuzi abakwazi ukusibona kahle isibhakabhaka sasebusuku, kanti abasezindaweni ezibomvu abakwazi ukubona iMilky Way. Ngokwezinye izifundo ngaphezu kwengxenye yesithathu yabantu bomhlaba wonke abakwazi ukubona umthala wethu.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngamamephu okukhanya okungcolisayo kanye nomthelela okukuwo ezinhlobonhlobo zezinto eziphilayo nakubantu.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » Amamephu wokungcola okukhanya
UJocelyn Bell Burnell